Tanàna tsara indrindra ho an'ny Tovovavy Firaisana ara-nofo ao Meksika Ankizivavy Lanitra
Meksika dia iray amin’ireo ambony mpizaha tany toerana eto amin’izao tontolo izao, izay tsy tokony hahagaga ny maro an’isa ianao. Izany dia firenena iray goavana rehefa avy rehetra, ary izany dia mampino isan-karazany eo amin’ny jeografia, ary koa ny maro amin ny tanàn-dehibe. Mora ny mieritreritra ny Mexico toy ny sasany generic tora-pasika toerana fizahan-tany noho ny habetsahan’ny resorts toerana ao amin’ny golfa, Karaiba, sy ny Oseana Pasifika. Tsy mahagaga izany, fa tsy maintsy mahalala fa misy zavatra bebe kokoa tokony Meksika noho fotsiny fotsy ny fasika eny amoron-dranomasina sy ny lohataona onja. Aho hoe, ireo rehetra tsara sy ny tsara, fa misy be dia be mba ho hita bebe kokoa afovoan-tany koa. Araka ny fihaonana ny tovovavy ho an’ny firaisana ara-nofo, sarotra ny mieritreritra ny firenena maro hafa fa ny tsara kokoa. Ny vehivavy eto dia mahagaga fa samihafa arakaraky ny faritra ianao ao amin’ny, ary ny mpila ravinahitra mponina dia somary matanjaka ihany koa, nitarika ny isan’ny safidy samy hafa ary fahafahana. Soa ihany, Meksika iray manontolo no mahatonga azy mora ny mahita na mpomba sy tsy mpomba ny ankizivavy, ka raha ianao manaitra ny avy ao amin’ny fikambanana na amin’ny andro lalao, afaka mandeha foana amin’ny rahalahy, dia namely ny iray mpivaro-tena, ary indraindray mahita ny sasany mendrika eny an-dalambe ny mpivaro-tena ihany koa. Misy zavatra ho an’ny olona rehetra. Zavatra tsara iray hafa dia ny vola lany eto. Meksika dia tsy toy ny mora toy ny sasany hafa toerana, fa ianao dia mbola afaka mahazo ny tsy mandany vola iray taonina ny vola, na dia any amin’ny tanàn-dehibe toy ny Tanànan’i Meksika. Sarotra ny tery ny zavatra teo, fa efa tonga ny mitondra amin’izao fotoana izao nandritra ny dimy tanàna tsara indrindra ho an’ny tovovavy sy ny firaisana ara-nofo ao Meksika. Eny, ny sasany hampiasa ny tanàna dia tafiditra ho an’ny antony tsara, fa misy betsaka ny fahasamihafana eto. Mihevitra aho fa ianao no tena mahita ny info tsara ny manomboka mieritreritra ny lalana. Rehefa manapa-kevitra eo amin’ny tanàna ireo, nampiasa ny fitambaran’ny fepetra sasany, anisan’izany ny kalitao ny ankizivavy, vahiny fitsarana, ny fiarovana, manintona, ary amin’ny ankapobeny traikefa. Mexico City dia tsy matetika ny tanàna voalohany amin’ny olona iray ao an-tsaina rehefa nieritreritra momba ny fizahan-tany sy ny fivoriana ny ankizivavy ao amin’ny firenena, fa io angamba no tokony ho izy. Toy ny iray amin’ireo ambony telo tanàna lehibe indrindra eto amin’izao tontolo izao, ny naripaka daholo ny sarangan’olona isa irery ihany no hahatonga izany ho zava-dehibe toerana rehefa te mba hahazatra ny sasany sexy Meksikana ny ankizivavy (sy be dia be ny tsy Meksikana ny tovovavy ihany koa.) Ity tanàna ity, raha ny marina dia tena cosmopolitan sy azo antoka ho an’ny ankamaroan’ny hafa, raha mbola azonao ampiasaina toy izany koa ny fahaiza-ianao rehefa mandeha mikasika ny fomba hafa tanàna lehibe. Ny olona tena namana sy ny tena, ary tia manampy anao hahita ny lalana manodidina sy manome tolo-kevitra. Misy iray taonina ny trano fisotroana sy ny clubs ao afovoan-tanàna faritra, izay mizara ho maro samy hafa ao. Misy iray taonina isan-karazany hanatitra asa eto ihany koa, be dia be amin’ireo tranon-dopy sy ny fanorana spas, esory ny fikambanana, ary tsara tarehy be na inona na inona koa ianao dia tsy mila (anisan’izany ny tsy hita isa ny ankizivavy dia afaka hihaona tsy mandoa vola amin’ny alalan’ny fampiasana ny mampiaraka toerana).
Ny ankamaroan’ireo ankizivavy eto raha ny marina velona momba ny tenany, fa tsy amin’ny fianakaviana sy ireo maro hafa vonona ny iray-alina mijoro. Zona Rosa sy Condesa dia roa tsara indrindra places ho eo ny fihaonana ankizivavy, indrindra ao Zona Rosa. The nightlife zava-niseho dia tena mavitrika ao amin’ity tanàna ity, ary afaka mahita ny sasany avo-quality miasa ankizivavy mihantona manodidina ny sasany amin’ireo trano fisotroana amin’ny alina ihany koa. Tena manao ny diany eto amin’ny fotoana iray. Eny, isika rehetra dia mahafantatra ny momba Cancun, fa mbola. Io toerana io dia mety ho tsara tarehy be na inona na inona tianao izany mba ho. Afaka manana ny tsara, nametra-indray, ny fianakaviana fomba diany, na ianao dia afaka mandany ny hariva ny fivoriana ankizivavy, na mandeha ho any amin’ny tena tanàna anjara mba hahitana ny sasany sahisahy kokoa niainany.
Indray, Cancun no manao izany
Ianao hihaino be dia be any mitaraina ary milaza fa tsy very maina ny fotoana raha te-hahazo nametraka be dia be, fa ny marina dia tsy fantatro ny ataony. Goavana be maro dia maro ny mpizaha-tany avy manerana izao tontolo izao dia miteraka fifanarahana tsara anarana ianao dia afaka manararaotra. Be dia be ny ankizivavy tsy izay nidina ho tsara ny fotoana, izay mety tsy ho rehefa niverina an-trano. Ataovy ao an-tsaina fa Cancun dia roa tena samy hafa ny toerana. Manana ny hotely sy trano fandraisam-bahiny ao amin’ny Faritra ny trano fandraisam-bahiny ao amin’ny saikinosy, sy ny tanàna lehibe izay bebe kokoa afovoan-tany — Afovoan-tanànan’i Cancun. Manana ananana toerana, fa raha fantatrao ny zavatra ataonao, dia afaka mahita ny trano fandraisam-bahiny lehibe, esory ny fikambanana, escorts, sy ny maro hafa. Raha tena te-hanana ny tsara fotoana, tonga teo nandritra ny Lohataona Handika volana. Na, vao tonga nandritra ny ririnina, raha ny mpizaha tany no tonga mba ho afa-mandositra ny hatsiaka ary aoka tsy mifatotra. Na izany na tsy izany, ianao noho ny an’ny sasany ny tsara asa. Monterrey dia tanàna fahatelo lehibe indrindra any Meksika sy ny renivohitry ny fanjakana Nuevo León. Izany antoka fa tsy ny tena ara-kolontsaina tanàna ao Meksika, saingy ho an’ny sasany fa raha ny marina dia mety ho mahafinaritra. Be dia be ny tandrefana gadra sy ny raharaham-barotra eto, ary vola be ihany koa. Ary arakaraka izay miresaka, ny mafana indrindra ny tovovavy ihany koa. Raha ny ankizivavy eto mba tsy ho variana amin’ny pasipaoro niaviany, izy ireo no tena mendrika ny fivoriana. Raha toa ianao matoky ny andro lalao, miezaka mihantona avy amin’ny Mercado Juarez, goavana tsena izay saika na inona na inona azonao atao. Ny tena malaza, ary manana tsara ny fahafahana mihazakazaka ny sasany lalao ary manao drafitra ho amin’ny hariva. Toy ny nightlife, ny ankamaroan’ireo dia nampiasaina mba ho manodidina Barrio Antigua, fa nisy fifindra-monina isan-karazany eo amin’ny manan-karena manodidina an’i San Pedro. Jereo Lobby raha mahazo ny fahafahana. Ny zavatra afaka mahazo kely pricey ny eto, ka ho vonona ny handany manodidina dolara nandritra ny alina avy tao amin’ny mafana indrindra, ary indrindra manokana ny fikambanana. Ny trade-off the top-notch ankizivavy dia afaka hihaona misy na izany aza, izay ihany koa mirona ho lasa mahaleo tena sy mahitsy, koa raha tsy miaina miaraka amin’ny ray aman-dreniny. Raha ny fivoriana Meksikana hookers, ny arabe-toerana dia niteraka, fa ny lavalava ny fikambanana dia mitovy vidy amin’ny tanàna hafa. Atahualpa Lehilahy Club malaza toerana, miaraka amin’ny Cielo Cabaret sy ny Voninahitra. Arakaraka ny toerana misy anao, mety ho afaka na mandeha indray ny toerana ho an’ny firaisana ara-nofo miaraka amin’ny stripper na maka azy any amin’ny trano fandraisam-bahiny. Puerto Vallarta iray hafa tsara tarehy spa faritra any amin’ny morontsiraka andrefan’i Meksika, ary tsy izany ihany no iray amin’ireo tora-pasika tsara indrindra manerantany, ny zazavavy-toerana dia miroborobo manerana. Mivezivezy manerana ny afovoan-tanàna sy ny Malecon faritra no hanome anareo be dia be ny toerana mba hijery tovovavy avy ao, tsy misy na inona na inona fotoana ny taona. Misy be dia be ny escorts azo outcalls koa, ary indraindray afaka mahita mpanohana sy ny semi-pro ankizivavy any am-ponja. Ary, araka ny mety ho efa naminavina, maro ny lavalava ny fikambanana izay manao toy amin’ireo tranon-dopy eto koa. Toy ny hafa resorts, ianao tokoa no manana ny safidy ny miezaka ny vintana ao amin’ny fikambanana, izay afaka hihaona hafa mpizahatany mitady ny mahafinaritra ihany ianao. Bar La Playa, Andale, El Masoandro, ary Copa misy tsara toerana mba hanandrana. Madio mangalahala ny toerana manodidina, mafana mponina, mamo-mpizaha-tany, ny rehetra ao amin’ny mahafatifaty locale. Puerto Vallarta dia kely underrated fa fandrebirebena, fa mendrika ny fitsidihana. Guadalajara no renivohitry ny Jalisco-panjakana, ary dia tena lehibe, na dia tena bebe kokoa amin’ny nentim-paharazana-tanàna. Izany ihany koa ny an-trano ny mariachi mozika sy ny tequila. Lehibe ny andro na inona na inona ny fotoana amin’ny taona, sy ny zandriny, hipper, kokoa amin’ny oniversite-karazana vibe izay manome mihevitra hafa avy izay te hahazo tao an-Tanànan’i Mexico, na kokoa touristy toerana toy ny Cancun. Zavatra kely aina kokoa eto fa azo antoka. Koa nahoana no tsara ny fandrebirebena toerana. Tsara, tsy misy tsara tarehy maromaro izay ahitana pelaka mponina eto, ary zavatra heverina ho be loatra ny ankizivavy eo amin’ny lafiny mponina. Tsy tena azo antoka ny antony, nefa tsy izany no toerana sasany izay ianao ho mifaninana amin’ny iray taonina any ianao rehefa avy sy ny momba ny. Misy ihany koa ny be dia be ny vola eto, izay niafara tamin’ny sasany ny tsara tarehy uppity ankizivavy izay mandray ny tarehiny ho zava-dehibe, ary dia nivoaka ny volana. Toy ny tokan-tena mandeha gringo, dia hahazo be dia be ny saina avy aminy. Raha toa ka efa nahazo andro tsara lalao, afaka hanadio eto. Manao ho nampitandrina fa tsy be antoko tanàna, ary tsy hahita ianao iray taonina ny nightlife misy hatramin’ny alakamisy. Na izany aza, afaka foana ny andro lalao, na namely ny lavalava ny fikambanana’ amin’ireo tranon-dopy toy Monaco Olona ny Fikambanana, Mahamenatra, Pussycats, na Volamena Club. Meksika no manana iray taonina ny tolotra, ary afaka afangaro zavatra rehetra isan-karazany ny safidy ny fialan-tsasatra amin’ny faritra, lehibe an-tanan-dehibe tanan-dehibe sy ny oniversite tanàna. Ny maha-ara-dalàna ny fivarotan-tena nametraka indray vibes ny mponina ao an-toerana sy ny fahafahana mivory ankizivavy izay mandalo, ary mety hisy noho izany antony izany ihany koa ianao dia rehetra mitambatra mba hahazoana Mexico ambony ny safidy ho an’ny firaisana ara-nofo ny fety
← Mexico Mampiaraka - Tanànan'i Meksika tokan-tena - Tanànan'i Meksika chat amin'ny POF
Maimaim-poana amin'ny chat ao Meksika →